Donald Trump - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အမျိုးအစား: Donald Trump
ဇန်နဝါရီလ 19, 2021 ဇန်နဝါရီလ 19, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
HHS အတွင်းရေးမှူးအဲလက်စ်အာဇာရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီး၊ Trump အုပ်ချုပ်မှုအမွေအနှစ်ကိုပျက်ပြားစေသည်ဟုဆိုသည်
ကျန်းမာရေးနှင့်လူသား ၀ န်ဆောင်မှုများအတွင်းရေးမှူးအဲလက်ဇ်အာဇာသည်နှုတ်ထွက်စာကို Trump အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင်သမ္မတအားမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည့်စာဖြစ်သည် CNN ကရရှိသော.
ဇန်နဝါရီလ 11, 2021 ဇန်နဝါရီလ 11, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ကမူနျူကလီးယားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုပြီးစီးပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ကိုရီးယားအလုပ်သမားများပါတီ၏ ၈ ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၈ ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်သည်ကင်ဂျုံအွန်အားကိုရီးယားအလုပ်သမားများပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ ကိုရီးယားအလုပ်သမားများပါတီကွန်ဂရက် (WPK) သည်ပါတီ၏ထိပ်တန်းအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
US Capitol Attack - စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေစဉ်တွင်ဖမ်းဆီးထားသောဒါဇင်ပေါင်းများစွာ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 10, 2021 ဇန်နဝါရီလ 11, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်လုံခြုံရေးအရာရှိများသည်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အားအတင်းအကျပ်ကျူးကျော် ၀ င်ရောက်သူများအားရာဇ ၀ တ်မှုအမှုအမျိုးမျိုးဆင်နွှဲခဲ့သည်။ စနေနေ့အထိကမ္ဘာကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောအဖြစ်အပျက်ကြောင့်လူ ၉၀ ကျော်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
Capital Hill အကြမ်းဖက်မှုကိုအစ္စရေးနှင့်ကမ္ဘာ့သံတမန်များကတုံ့ပြန်ကြသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 10, 2021 ဇန်နဝါရီလ 10, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်၏ရန်သူနှင့်မဟာမိတ်များသည်အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီ၏အဓိကရုဏ်းကြောင့်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့်ခေါင်းကိုခါလိုက်ကြသည်။ များစွာသောနိုင်ငံခြားခေါင်းဆောင်များကလွတ်လပ်သောလူ ဦး ရေကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနှင့်အမေရိကန်၏အခန်းကဏ္ stability ၏အရေးပါမှုကိုတည်ငြိမ်မှုသို့အလျင်အမြန်ပြန်လာရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အများအပြားကသမ္မတ Trump အပေါ်အပြစ်တင်။ အခြားသူများကမူသတင်းမီဒီယာအပေါ်အပြစ်ပုံချခြင်း၊ Trump အုပ်ချုပ်မှုအတွင်းတရားမျှတမှုကိုထိန်းသိမ်းနေကြောင်းအမေရိကန်များ၏စိတ်ထဲတွင်သံသယဖြစ်စရာ Corona Pandemic မတိုင်မီ Trump အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအတုများတင်ခဲ့သည်။
Trump မေရှိယမဟုတ် - သူကောင်းတစ် ဦး ကြိုးစားဖန်ဆင်းတော်မူ၏
ဇန်နဝါရီလ 8, 2021 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
သမ်မတ Trump သည်အမြင့်ဆုံးမေရှိယစံနမူနာနှင့်အတူသမ္မတအဖြစ်သူ၏သက်တမ်းစတင်ခဲ့သည်။ သူကအမေရိကန်၏အင်အားသည်လွတ်လပ်မှုနှင့်ဒီမိုကရေစီတို့နှင့်အတူစုစည်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သူသည်လွတ်လပ်ခြင်းနှင့်ဒီမိုကရေစီ၏အနှစ်သာရကိုညစ်ညမ်းစေသည့်လွတ်လပ်သောဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းများကိုအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုခြင်း၊ အင်အားကြီးမားသောအမေရိက၏အင်အားနှင့်သူသည်အစ္စလာမ်နှင့်ဂျူးဘာသာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်ကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်ခဲ့သည်။
လမ်းဆုံလမ်းခွ၌တရုတ် - အမေရိကန်ဆက်ဆံရေး
ဇန်နဝါရီလ 2, 2021 ဇန်နဝါရီလ 2, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
တရားဝင်မီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Wang Yi သည် Trump အုပ်ချုပ်ရေး၏လုပ်ရပ်များကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချသည် တရုတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်စစ်အေးတိုက်ပွဲအသစ်ကိုဆင်နွှဲရန်နှင့်၎င်းသည်ကမ္ဘာကြီးကိုထိခိုက်စေသည်ဟုဆို သူက Biden ဦး ဆောင်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်သည် "ကျိုးကြောင်းညီညွတ်မှုပြန်လည်ရရှိပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်လိမ့်မည်" ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။
US House မှအရေးပေါ်အကူအညီများတိုးမြှင့်ခြင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်
ဇန်နဝါရီလ 2, 2021 ဇန်နဝါရီလ 2, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
covid-19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျပ်အတည်းကြောင့်ပြည်သူများကိုအမေရိကန်အစိုးရ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမှာတနင်္လာနေ့တွင်ဖြစ်သည် $2ဒေါ်လာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်ကန ဦး အတည်ပြုထားသောအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၀ အစားအစားထိုးခြင်းကိုရီပတ်ဘလီကန်အများစုနှင့်အထက်လွှတ်တော်ကအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။
Joe Biden အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲသည်အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာအတားအဆီးများကိုညည်းတွားသည်
ဂျိုးဘိုင်ဒန်ယာယီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Yohannes Abraham သည်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဘတ်ဂျက်ရုံးအားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်သည့်အတားအဆီးများကိုဖော်ထုတ်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဌာနများ၌ (ကျွန်ုပ်တို့) သည်အမျိုးမျိုးသောအေဂျင်စီများမှနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုမှအတားအဆီးများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
လှုံ့ဆော်မှုဘီလ်ကဝယ်လိုအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည်၊ AA သည် MA737 Flights ကိုပြန်လည်စတင်သည်
ရေနံစိမ်းအနာဂတ်သည်ယခင်ကုန်သွယ်ရေးနေ့၏ဆုတ်ယုတ်မှုများကိုတွေ့ကြုံပြီးနောက်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတံခါးပိတ်ခဲ့သည်။ နယူးယောက်ရေနံစိမ်းသည် ၀.၈ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ကာဒေါ်လာ ၄၈ တွင်နိမ့်ခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာကုန်သည်များကယူအက်စ်တွင်အကြီးစားအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်အသစ်များသည်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Human Rights Watch - တရုတ်ဗိုင်းရပ်စ်သတင်းထောက်များအားတရုတ်ဖမ်းဆီး
ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
စနေနေ့တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့ Human Rights Watch (HRW) ကတရုတ်အာဏာပိုင်များအားပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခဲ့သည် သတင်းသမားများနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအားဖမ်းဆီးခြင်း သူက“ covid-19 ကူးစက်ရောဂါနှင့်တရုတ်အစိုးရအတွက်အရေးပါသည်ဟုယူဆရသည့်အခြားကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပို့သည်။
Biden, López Obrador ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်ကတိပေး
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
မက္ကဆီကိုသမ္မတAndrés Manuel López Obrador သည်စနေနေ့တွင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်နှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်“ အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်” ကတိပေးခဲ့သည်။ “ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းပြည်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်” လိုပက်ဘ်အော်ဘရာဒေါကတွစ်တာတွင်ပြောကြားခဲ့သည်.
ယူနိုက်တက်စတိတ် -Pompeo ကရုရှားကိုဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Mike Pompeo အမေရိကန်အစိုးရအပေါ်အဆိုးရွားဆုံးဆိုက်ဘာသူလျှိုတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ရုရှားကိုတိုက်ရိုက်အပြစ်တင်ခဲ့သည် မော်မော့စ်သည်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်ဟုပွန်ပေကစွပ်စွဲခဲ့သည်။ သောကြာနေ့ထုတ်ပြန်ချက်များတွင်သူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည် ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်က တကယ့်အန္တရာယ်ဖြစ်နေဆဲ
“ အရှုံးမပေးပါနှင့်” ထောင်နှင့်ချီသော Trump ထောက်ခံသူများကသူ့ကိုအားပေးပါသည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
သမ္မတ Donald Trump ရဲ့ ထောက်ခံသူတွေသူတို့ရဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်စုဝေးစေတော်မူ၏ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကိုမှောက်လှန်ရန်သမ္မတအားတောင်းဆိုမှုအပေါ်အမေရိကန်တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကန့်ကွက်ရန်နှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွင်အရှုံးမပေးရန်သမ္မတအားတောင်းဆိုရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမြို့ကြီးများစွာတွင်စနေနေ့တွင်ဖြစ်သည်။